Home Wararka Gabbaldaye MW Farmajo oo 13kii Sanetor ee Gobolka Banadir ma Mar kale...
Gabbaldaye MW Farmajo oo 13kii Sanetor ee Gobolka Banadir ma Mar kale ayuu Cirka u Tuuray? Akhriso
La yaab ma leh in MW Farmajo uu mar waliba meel aadan ka fileyn ka soo boodo, waayo inta badan kum ashaqeeyo caqliga cadi ah oo waa qof sidii hawada isu badbadadala.
Laba maalin ka hor waxaa uu soo tuuray MW Farmajo waraaq wiifto ah oo u ku sheegayey inu saxeexay 13kii Xildhibaan ee la yiri waxay aqalka sare ku matalayaan Gobolka Banaadir. Cumar Finish iyo Kooxaha villada ka kalluumeysta isla markiiba waa la boodeen oo waxay soo jafeen barakacayaasha waxayna si qabteen bannaanbax la leeyahay waxaa lagu taageerayaa arrinkaas, iyadoo uu weliba uu Cumar Finish hanjabaad u soo jeediyey kooxaha diidan beenta Farmajo ee leh “ War Been, isku dir iyo Daneysi gaar ah”.
Maanta oo MW Farmajo ay u hartay 8 Mallmood oo kaliya muddo xileeedkiisii uu talada madaxdweynimo ee dalka uu hayn lahaa ayaa haddana caawa waxaa soo saaray wiifto kale oo u qoran “ Shirka wadatashiga ee Madaxweynuhu isugu yeerayo Madaxda Dowlad Goboleedyada, waxaa saldhig u ah heshiiskii 17-ka Sebteembar 2020 laga gaaray hannaanka doorashooyinka, ayna meelmariyeen Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya”.
Haddaba wiiftdaan dambe shirka ka dullaya 17ka Sebtember 2020, miyeysan ka hor imaaneyn tii loo soo bannaanbixiyey barakcayaasha ee ay Cumar Finish iyo Cali Yare soo qaban qaabiyeen, waayo heshiiska 17kii Setemmber 2020, wuxuu ku saleysan yahay sida uu hadda yahay aqalka sare oo ah 54 xubnood una qeybsan qaabka uu yahay, iyadoo horaba ay maamullada Puntland iyo Juballand u sheegeen inaysan distuuri ahayn waxa uu MW ka soo ka xodxotay aqalka hoose oo runtii aan marnaba dan qaran ka fekrin intii ay joogeen, kadib markii loo smeeyey hogaan cusub.
Waxaa wax yar ka hor ka soo socotay meel aan halkaan ka fogeyn xaflad la leeyahay waxaa lagu taageerayaa wiiftada hore 13ka MW Faramjo iyo RW Rooble oo uu muuqda shakhsi aan is ogeyn xataa inuu nool yahay.
Haddii Dhuusamareeb lagu noqdo waxaa si cad daaqadda uga baxaya 13kan la sheegay in lagu aamusinayaa dadka reer Banadir si looga weeciyo hawshooda u socotay ee ay ku dhisanayeen Dowlad-Goboleed Banadir State oo ay horkacayaa aqoonyahannada iyo Cuqaasha toosan ee reer Banadir. Misa waa dhimatay oo waa la kala daadiyey iyadoo la hubo inaan 13 Senetor iwm aan lagu heleyn sharafta iyo awoodda ay Banadir state la iman lahayd haddii xoogaa naf hurnimo ah loo sameeyo, khsabna lagu dhiso sida Jubaland.
Haddaba Caawa seddex qoloba mid hawl u goon ah ayaa u taalla:
Cumar Finish iyo Cali Yare waxa u taalla hawl culus mar kale miyaa la soo saari doonaa barakacayaasha oo waxay sameyn doonaan bannaanbax looga horjeedo wiiftada cusub, misa waa iska aamusi doonaan oo dadkooda ayey dhinac ka raaci doonaan, sugina doonaan inay u marto iyo in kale Dhuusamareeb kadib.
Maamullada Puntland iyo Jubaland ma ka aamusi doonaan dabinkaan uu Farmajo u dhigay misa waa ka hor iman doonaan iyagoo leh Sharci maaha oo waxay jebineysaa miisaanka uu hadda ku sameysan yahay aqalka Sare?
MW Farmajo iyo Kooxdiisa ma waxay raaci doonaan in la iska illoobo 13ka oo awalba khiyaanada ahaa oo raaligelinta Puntland iyo Jubbaland ayaa ugu muhiimsan Dadka Banadir marka shirka la isugu tago maadaama aan wali la dhaqangelinin 13ka uu sheegayo Farmajo , misa si kuwaas looga sii xanaajiyo waa ku adkeysan doonaan in la dhaqangeliyo dhowaan?